Nepal Dayari | सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ , तर यो सत्यता नै हो ! एक्कासी रचना रिमाल चटपट बेच्दै (भिडियो सहित)
सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ , तर यो सत्यता नै हो ! एक्कासी रचना रिमाल चटपट बेच्दै (भिडियो सहित)
पुष १, २०७८ बिहिबार २२८ पटक हेरिएको
कार्यक्रममा आफ्नो प्रस्तुति दिन चर्चित गायिका रचना रिमा सुगम पोख्रेल लगाएत अन्य थुप्रै कलाकार भोजपुर पुगेका थिए। एसै क्रममा बाटोमा रचनाले चटपट बनाएर सबैलाई खुवाएकी थिइन सुगम पोख्रेलले नीकै प्रसंसा गरे रचनाको र उनले बनाएको चटपटको।
गायिका रचना रिमाल १९ बर्षकी भएकी छिन् । उनले आफ्नो जन्मदिन शुक्रबार मनाएकी हुन् । झापाकी रचनाले सँघर्षबाट सुरु गरेको आफ्नो गायन यात्रापछि धेरै नेपाली गीतहरु गाईसकेकी छिन् । उनका धेरै हिट गीतहरु पनि रहेका छन् ।
शिशिर भण्डारीले शव्द कोरेको र सँगीत भरेको गीत फोटो फिरिममा गाईसकेपछि रचनाको साँगीतक करिअर अझै उकालो लागेको थियो । गीतकै सहकार्यको शिलशिलामा शिशिरले रचनालाई आफ्नो बहिनी बनाएका थिए । त्यसपछि पनि शिशिरको अन्य गीतहरुमा पनि रचनाले आवाज भरिन् ।